Inflatable Horse Shape--OH4-304 Inflatable Caterpillar Shape boat made with 0.9mmPVC tarpaulin material. Pano pazasi pane rumwe ruzivo: Kurongedza & Delivery Packing details: Strong PVC tarpaulin bag & exported standard carton Delivery details: 7-15 working days after receiving deposit Specifications Size(L*W*H): 2.2x1m H or customized Material: Best 0.9mm PVC tarpaulin Grade:…
Inflatable large seesaw--OH4-306 Inflatable large seesaw made with 0.9mmPVC tarpaulin material. Pano pazasi pane rumwe ruzivo: Kurongedza & Delivery Packing details: Strong PVC tarpaulin bag & exported standard carton Delivery details: 7-15 working days after receiving deposit Specifications Size(L*W*H): 5x2.5m H or customized Material: Best 0.9mm PVC tarpaulin Grade: Commercial…
Inflatable tower slide--OH4-307 Inflatable tower slide made with 0.9mmPVC tarpaulin material. Pano pazasi pane rumwe ruzivo: Kurongedza & Delivery Packing details: Strong PVC tarpaulin bag & exported standard carton Delivery details: 7-15 working days after receiving deposit Specifications Size(L*W*H): 5.9x3.5x4m H or customized Material: Best 0.9mm PVC tarpaulin Grade: Commercial…
Inflatable Gyro toy--OH4-308 Inflatable Gyro toy made with 0.9mmPVC tarpaulin material. Pano pazasi pane rumwe ruzivo: Kurongedza & Delivery Packing details: Strong PVC tarpaulin bag & exported standard carton Delivery details: 7-15 working days after receiving deposit Specifications Size(L*W*H): 3x2x1.5m H or customized Material: Best 0.9mm PVC tarpaulin Grade: Commercial…
Inflatable slide for sea made with 0.9mmPVC tarpaulin material. Pano pazasi pane rumwe ruzivo: Kurongedza & Delivery Packing details: Strong PVC tarpaulin bag & exported standard carton Delivery details: 7-15 working days after receiving deposit Specifications Size(L*W*H): 4x2.2m H or customized Material: Best 0.9mm PVC tarpaulin Grade: Commercial Stitching:…
Inflatable iceberg--OH4-310 Inflatable iceberg for sea made with 0.9mmPVC tarpaulin material. Pano pazasi pane rumwe ruzivo: Kurongedza & Delivery Packing details: Strong PVC tarpaulin bag & exported standard carton Delivery details: 7-15 working days after receiving deposit Specifications Size(L*W*H): 4x3m H or customized Material: Best 0.9mm PVC tarpaulin Grade: Commercial…